I-fleet ye-Ellicottt® Dredges isetshenziselwa i-Brazilian Tin Mining Refund Pro- Ellicott Dredges
AMA-DREDGES OKHETHEKILE WOKUFOBA Ugesi - “Stelinha V”, “Stelinha VI” kanye no “B890E”
Umnikazi - iMineracao Taboca, eBrazil
IMINININGWANE EYODLULA: “USteninha V” "USteninha VI" I-“B890E”
Usayizi we-Hull - ubude ngezinyawo 110 ' 81 ' 56
Ubunzulu Obukhulu Bokumba 36 ' 26 ' 21 '
Ukudonsa Usayizi Wepayipi - ID 16 " 14 " 10 "
Ukukhishwa Usayizi wePayipi - ID 16 " 14 " 10 "
I-Dredge Pump Horsepower 500 600 350
Isisulu sehhashi 250 100 40
Ingqikithi efakiwe I-Horsepower 1000 850 420
INFORMATION PROJECT: Kuze kube manje inani elikhulu kunawo wonke labavubukuli abanamasondo amabili endaweni eyodwa basebenza emayini yethini ecebile kakhulu entshonalanga ePitinga, esigodini sase-Amazon saseBrazil. Itholakala ngaphezu kwamakhilomitha angama-300 enyakatho-mpumalanga yetheku loMfula i-Amazon iManaus, imayini iqhutshwa yiParanapanema, kanti ngonyaka odlule ikhiqize ithini elingaphezulu kuka-10% emhlabeni. Imikhumbi ye-dredge ifaka ezine i-Ellicott® ama-brand amabili amasondo, kanye nama-Ellicott amahlanu® brand single amabhakede.
I-cassiterite ore yaxhashazwa ekuqaleni ngabacuphi be-Caterpillar 245 hydraulic, kepha iParanapanema yazama ukuqeda iminyaka eyi-10 eyedlule yathola ukuthi ithuthukisa ukuvuselelwa kwamathini. I-slurry ilungele ukugxila futhi inegalelo ekululameni okuthuthukile. AmaPitinga dredges athola i-ore kusuka ekujuleni okufika ku-8m. Iyunithi enkulu kunazo zonke i-B1690 kepha iningi lemikhumbi lakhiwa ngama-75 kW - isilinganiso samandla ebhakede - amamodeli we-B890.
Ngokusetshenziswa kwalolu hlobo lwemishini, ukukhiqizwa kwabo kukhuphuke kusuka kumathani we-3000 ngonyaka eminyakeni eyisishiyagalombili edlule kuya kumathani we-23,000.
I-Shore powered wheel dredge ye-tin yezimayini ukufaka esikhundleni izingcezu eziningi zemishini eyomile futhi ikhuphule ukusebenza kahle kwesihlukaniso. Iphatha ubumba kahle.